Barcelona & Wakiilada Erling Haaland Oo Kulan Uu Haatan U Socdo & Xaqiiqda Ka Danbeysa Safarkooda Oo La Shaaciyay - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaBarcelona & Wakiilada Erling Haaland Oo Kulan Uu Haatan U Socdo & Xaqiiqda Ka Danbeysa Safarkooda Oo La Shaaciyay
Barcelona & Wakiilada Erling Haaland Oo Kulan Uu Haatan U Socdo & Xaqiiqda Ka Danbeysa Safarkooda Oo La Shaaciyay
April 1, 2021 admin Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Aabaha dhalay Erling Haaland ahna la taliyihiisa iyo wakiilka ciyaaryahanka Mino Raiola ayaa saaka oo Khamiis aheyd ka degay magaalada Barcelona si ay wadahadal u la yeeshaan madaxweynaha kooxda Blaugrana Joan Laporta.
Labada nin waxaa garoonka diyaaradaha Barcelona ka soo kaxeeyay gacan yaraha Joan Laporta kaasoo balanqaaday doorashadiisa ka hor inuu soo xeroglin doono xiddiga Borussia Dortmund Erling Haaland.
Wakiilada ciyaaryahanka iyo Barcelona ayaa haatan kulan uu u socdaa iyagoo kawada hadlaya suurtogalnimada uu ciyaaryahanka xagaagan ku caga dhigan karo garoonka Camp Nou.
Laakiin khabiirka looga danbeeyo wararka suuqa kala iibsiga Fabrizio Romano ayaa sheegay in kulanka maanta dhexmaray wakiilada ciyaaryahan Erling Haaland iyo Barcelona uu yahay mid bilow u ah kulamo dhowr ah oo ay la yeelan doonaan kooxo badan.
“Mino Raiola waxa uu la kulmi doonaa lana hadli doonaa kooxo kale oo waa weyn todobaadyada soo socda” ayuu yiri Fabrizio oo xaqiijiyay in kulanka maanta uusan la micno aheyn in Barcelona ay ku horeyso saxiixa ciyaaryahanka.
“Bayern Munich kuma jirto tartanka xagaagan. Raiola waxa uu sidoo kale la kulmay Borussia Dortmund todobaadkan isagoo kala hadlay qiimaha Haaland.
“Lacagta lagu burburin karo qandaraaska Haaland ma ahan mid shaqeyneysa sannadkan 2021, kaliya waxaa la adeegsan kaara bisha July 2022.”
Barcelona ayaa ka mid ah kooxaha sida weyn u xiiseynaya Erling Haaland inkastoo kooxda ay heyso dhaqaale darro xoogan iyagoo sidoo kalena isku dayaya inay heshiis cusub ka saxiixaan Lionel Messi oo qandaraaskiisa uu dhacayo bisha Juun.
Kooxaha kale ee tartanka ugu jira saxiixa Erling Haaland waxaa ka mid ah Real Madrid, Manchester City, Chelsea iyo Manchester United.